I-Loft 29, i-attic eqaqambileyo ye-85 yeemitha zesikwere. nge terrace - I-Airbnb
I-Loft 29, i-attic eqaqambileyo ye-85 yeemitha zesikwere. nge terrace
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGiulio
UGiulio ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
Uphahla olutsha olutsha olumalunga ne-85 square metres. Kukhanya kakhulu kunye neefestile ezinkulu kunye ne-terrace yokusetyenziswa ngokukodwa ejongene neentaba ezimalunga ne-25 square metres. Inendawo yokuhlala enkulu enekhitshi, ene-air conditioning, isiqithi sesidlo sakusasa, ibhedi yesofa (kabini). Igumbi lokulala elikhulu eline-air conditioning (kunye nethuba lebhedi enye eyongezelelweyo) kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwi-terrace kunye negumbi lokuhlambela elineshawa kunye nomatshini wokuhlamba. Apha uya kufumana yonke into oyifunayo ukupheka.
I-attic yakhiwa ngoJuni ka-2019 ngeliso elithile kumgangatho wefenitshala, iindawo kunye nokuqaqamba kwazo kunye nokusebenza. Indawo yokupaka yabucala evaliweyo iyafumaneka ngaphakathi kwintendelezo kwaye kukwakho nokubakho ikhenopi yangaphakathi yezithuthuthu okanye iibhayisekile. Le ndlu ibekwe kumgangatho wesibini kunye nokuvezwa rhoqo elangeni kunye nombono omangalisayo weAlps.
Indlu ibekwe kuhola wendlela 24 we monginevro kunye nokufikelela lula. I-loft endaweni yoko ijonge kwelinye icala elijongene namadlelo ajikelezileyo kunye neentaba kunye nembono emangalisayo kwindawo ezolileyo.
Ukuhlala kumgangatho ongaphantsi kwe-attic kunye nokusebenza kumgangatho ophantsi wendlu, sihlala sifumaneka kulo naluphi na uhlobo lwemibuzo kunye neengcebiso.
Inombolo yomthetho: 00104400003
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bussoleno